Zithini iifowuni zeWiFi kwaye zezantoni? | Iindaba zeGajethi
IiVillamandos | | ngokubanzi, Iiselfowuni
Ngexesha elithile elidlulileyo ndaye ndagqiba kwelokuba nditshintshe indlu yam yakudala embindini wesixeko esibaluleke kakhulu eAsturias, ndlu enesitiya kwidolophu encinci yaseAsturian, kude phantse kuyo yonke into. Eli linani elikhulu lezinto eziluncedo, kodwa kunye nezinye izinto ezingeloncedo njengokunqongophala kwendlu eyenza ukuba ngalo lonke ixesha ndifuna ukuthetha emnxebeni kufuneka ndiphume ndiyenze, into ethi ngeentsuku ezibandayo nemvula ziyinyani. ukungakhululeki.
Ngethamsanqa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndiye ndafowunela abathengi beenkonzo zam zefowuni eziphathwayo ukuba babonisane ngemiba eyahlukeneyo, nalapho bandiphatha kakuhle kakhulu, bendibuza ukuba ndisenazo na iingxaki zokugubungela esele bethethile izihlandlo ezininzi. Kungelo xesha ke ndaye ndacetyiswa ukuba ndisebenzise Iifowuni zeWiFi malunga nokuba namhlanje siza kuthetha kwaye sifunde ulwazi olunomdla kakhulu ngazo.
1 Zithini iifowuni zeWiFi?
2 Aba ngabasebenzi abahambahambayo abanenkxaso yeefowuni zeWiFi
4 Ixesha elizayo lokufowuna kwe-WiFi
Zithini iifowuni zeWiFi?
Ngaphandle kwento yokuba abantu abaninzi banxulumana neefowuni zeWiFi kunye neefowuni ezithi zenze ukuba imiyalezo eyahlukeneyo yangoku ikwenze ifumaneke kuthi, yimigaqo emibini eyahluke ngokupheleleyo. Kwaye kunjalo Iifowuni zeWiFi ziyasivumela, umzekelo, ukufumana umnxeba usebenzisa uqhagamshelo lwethu lweWiFi, nokuba asinaso isigubungelo esiphathwayo.
Ngelishwa, ngalo mzuzu olu hlobo lwefowuni alufumaneki kuzo zonke izixhobo eziselfowuni kwintengiso kwaye ayizizo zonke iifowuni eziphathwayo ezivumela ukufikelela kolu ncedo lunomdla, olubaluleke kakhulu kubasebenzisi abangenanto ingako okanye abangenayo kwindlu yethu.
Ukongeza kwiminxeba, ngothungelwano lwe-WiFi lwasekhaya okanye lomsebenzi, ngaphandle kokugquma, singathumela iSMS. Ewe kunjalo, kubalulekile ukuyenza icace ukuba zombini iifowuni kunye nemiyalezo ebhaliweyo ihlawuliswa ngendlela efanayo nayiphi na enye ifowuni. Ukuba unenqanaba lokufowuna ngokungenamkhawulo akufuneki ukhathazeke nangaliphi na ixesha, kodwa ukuba umzekelo unebhonasi yemizuzu, kuya kufuneka ulungelelanise nelo nani lemizuzu ngaphandle kokusebenzisa inkonzo yokufowuna ye-WiFi.
Aba ngabasebenzi abahambahambayo abanenkxaso yeefowuni zeWiFi
Njengoko besesitshilo ngaphambili Ayisiyiyo kuphela into yokuba neselfowuni ehambelanayo, kodwa neselfowuni yethu kufuneka isinike inkxaso kolu hlobo lweefowuni.. Okulandelayo, siza kuvavanya abona baqhubi baphambili kwilizwe lethu, ukuze sazi ukuba singazuza na okanye hayi kule nkonzo ithandwayo.
Umqhubi wemvelaphi yesiFrentshi wayengomnye wabokuqala ukubonelela ngeefowuni zeWiFi kubasebenzisi bayo, ukuba nje banezinye iirhafu ezihlawulelwayo. Ngelishwa inani leetheminali ezihambelanayo lincinci kakhulu okwangoku kwaye sifumana kuphela i- I-iPhone 5c, 5s, 6 okanye 6s, ukongeza kwi-iPhone 7 esele kwintengiso kuphela iintsuku ezimbalwa. Ukuya kuthi ga ngoku Android ichaphazelekayo, kuphela I-Samsung Galaxy S6, i-S6 Edge, i-S7 kunye ne-S7 Edge ukuthengwa eorenji kusinika ithuba lokusebenzisa iifowuni zeWiFi.
Kwiwebhusayithi yeOrange sinokufumana isixa esikhulu solwazi malunga nale nkonzo, kunye nencwadana encinci ukuyenza isebenze kwizitishi ezihambelanayo;
Inkampani eluhlaza yeyaseOrange, kwaye ime ngaphandle ngamaxabiso ayo asezantsi, isebenzisa ingxelo yomqhubi waseFrance. Kwimeko yeefowuni ze-WiFi, okwangoku Zisebenza kuphela kwii-smartphones ezinenkqubo yokusebenza ye-iOS, ukusuka kwi-5c.
Ingxaki encinci enokuthi ivele kubasebenzisi abaninzi be-Amena kukuba baneselfowuni kuphela abanesivumelwano, ngenxa yoko abayi kuba nakho ukufikelela kwiminxeba ye-WiFi nangayiphi na indlela.
Inkonzo yokubiza i-WiFi eMovistar iyafumaneka kwifomathi ye- Isicelo seTu de Movistar, efumaneka ukhuphelo kuGoogle Play, iVenkile ye App okanye isemthethweni Windows 10 Ivenkile yesicelo seFowuni.
Le nkonzo iyafumaneka kwimigca ehlawulwa kwangaphambili nangemva kokuba uhlawule, ukubanakho ukudibanisa inombolo yethu yefowuni kunye nezixhobo ezihambayo ezi-5.
TU evela eMovistar
Umthuthukisi: Ifowuni yeDijithali
UTuenti ngomnye wabasebenzisi beefowuni eziphathwayo, abaziwa njengabo babonakalayo inikezela abasebenzisi bayo ngenkonzo yokufowuna i-WiFi, ngamaxabiso eVozDigital. Ukuze ukwazi ukwenza olu hlobo lweefowuni, kuya kwanela ukufakela usetyenziso lweTuenti kwisixhobo sethu esiphathwayo kunye nokwenza kusebenze ukhetho lokufumana iifowuni kuphela ngeVozDigital.
Ukongeza, kwicala elifanelekileyo, uluhlu lwezixhobo ezihambelanayo lubanzi kwaye lwanele ukuba ne-iPhone 4s okanye nayiphi na ephezulu, okanye i-terminal ene-Android 4.0 okanye ngaphezulu kunye ne-1Ghz okanye iprosesa ephezulu kunye ne-512MB ye-RAM. Ungajonga LAPHA uluhlu olupheleleyo lwezixhobo ezihambelana neefowuni zeTuenti WiFi.
Ixesha elizayo lokufowuna kwe-WiFi
Njengoko sele ubonile, uninzi lweefowuni ezinkulu ezisebenza ngobukho eSpain ziqalisile ukunika abasebenzisi bazo inkonzo yeefowuni zeWiFi. Ezinye ezinje ngeOrange ziyakuvumela ukuba uyisebenzise ngaphandle kokufaka usetyenziso lweselfowuni, ngokungathandabuzekiyo luyintsikelelo. Ngelishwa kwaye ngokungafaniyo neMovistar, zii-smartphones ezimbalwa kuphela eziya kuba nakho ukusebenzisa le nkonzo inomdla.
Iifowuni zeWiFi zinokuba ngumdla wokwenene, kuba zinokusikhupha ngaphandle kwengxaki enye okanye, kwimeko yam, indivumela ukuba nditsalele umnxeba ekhaya, ngaphandle kwengqele ebusika. Kwiinyanga ezizayo ngokuqinisekileyo siza kubona ukuba iOrange okanye iMovistar iyiphucula njani le nkonzo, kwaye indlela iVodafone nayo eqala ngayo ukubonelela ngolu hlobo lweefowuni, okwangoku okwangoku akukho mkhondo kwinkampani ebomvu.
Ngaba ukhe wasebenzisa iifowuni zeWiFi ezithi zisebenze ngakumbi nangakumbi?. Sitshele kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Zithini iifowuni zeWiFi kwaye zezantoni?
Akukho nto konke konke malunga neMovistar Spain?